Madaxweyne Erdogan oo booqasho ku jooga dalka Kuwait | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Madaxweyne Erdogan oo booqasho ku jooga dalka Kuwait
Madaxweyne Erdogan oo booqasho ku jooga dalka Kuwait
Muqdisho (SONNA) Madaxwaynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa booqasho rasmiya ku tagay wadanka kuwait kadib martiqaad uu ka helay amiirka wadankaasi Sheekh Sabah Al – Ahmad Al-Jaber Al- Sabah.
Recep Tayyip Erdogan markii uu soo gaarey garoonka diyaaradaha waxaa halkaa ku qaabiley Ra’iisul wasaare ku xigeenka ahna wasiirka arimaha dibada wadanka kuwait Sheekh Sabah Al-Khalid Al-Hamad.
Madaxwayne Erdogan ayaa sheegay inta uu ku guda jiro safarkan inuu kala hadlayo dawlada kuwait xiisada ka dhex aloosan dawladaha khaliifka waxaanu ugu baaqay madaxda gobolka inay ka sheqeeyaan sidii la iskugu soo dhaween lahaa dadka walaalaha loogana shaqeyn lahaa isku duubnaanta iyo midnimada khaliijka.
Afhayeenka Madaxtooyada Turkiga Ibraahim Kalan ayaa sheegay in madaxwayne Erdogan intuu ku sugan yahay wadanka Kuwait inuu kala hadli doono arimaha xiriirka labada wadan sidii loo xoojin lahaa sdioo kale ganacsiga, Maalgashiga, dalxiiska, warshadaha ,Militariga iyo Waxbarashada, Afhayeenku wuxuu intaasi ku daray in Mr Erdogan marka uu dhameysto booqashadiisa wadanka kuwait inuu uga sii gudbi doono wadanka Qatar halkaasuu kaga qayb gali doono shirka Guddiga Istaraatiijiga Turkiga iyo Qatari.
Previous articleCiidamada Xoogga dalka oo la wareegay deegaano ku dhow magaalada Baraawe
Next articleWasiirka Warfaafinta oo Hortagay Guddiga Warfaafinta ee Aqalka sare+Sawirro